Maninona no zava-mahadomelina ireo mpivarotra mamaky ny ho avy tsy misy cookie | Martech Zone
Zoma 6 Novambra 2020 Zoma 6 Novambra 2020 Tim Beveridge
Miaina anaty fiovan'ny paradigma manerantany isika, izay misy ny ahiahy momba ny fiainana manokana, ampiarahina amin'ny fahafatesan'ny cookie, dia manery ny mpivarotra hamoaka fanentanana manokana sy feno fangorahana, ao anatin'ny tontolo azo antoka. Na dia manome fanamby maro aza izy io, dia manome fotoana maro ihany koa ho an'ireo mpivarotra hamaha tetika fitadiavana valim-panafahana manan-tsaina kokoa.
Miomana amin'ny ho avy tsy misy cookie
Ny mpanjifa tsy mitsaha-mitombo ny fiainany izao dia mandà ny cookie an'ny antoko fahatelo, miaraka amin'ny tatitra tamin'ny taona 2018 izay nanambara fa 64% ny cookies no nolavina, na amin'ny tanana na amin'ny blocker doka - ary izany dia talohan'ny fampiharana lalàna momba ny tsiambaratelo vaovao. Ambonin'izany, 46% ny telefaona ankehitriny no mandà manodidina ny 79% ny cookies, ary ny marimaritra iraisana amin'ny cookie matetika dia mahatratra 30-70%.
Amin'ny taona 2022, Google dia hanafoana ny cookie fahatelo, zavatra efa vita Firefox sy Safari. Kaonty Chrome omena ho an'ny maherin'ny 60% amin'ny fampiasana ny tranonkala, raharaha lehibe ho an'ny mpivarotra sy ny mpanao dokambarotra izany, indrindra ireo izay mampiasa programmatic. Ireo mpizaha tany ireo dia mbola hamela ny cookies an'ny antoko voalohany - farafaharatsiny izao - fa ny mazava dia tsy azo ianteherana intsony ny cookie amin'ny fampahalalana ny lasibatra fitondran-tena.
Inona no tanjona kendrena eo amin'ny tontolon-karena?
Ny fikendrena ny tontolon-kevitra dia fomba iray hikendrena ireo mpihaino mifandraika amin'ny fampiasana teny lakile sy lohahevitra nalaina avy amin'ny atiny manodidina ny lisitra dokam-barotra, izay tsy mila cookie na mpamaritra hafa.
Ny tanjona kendrena manaraka izao dia miasa amin'ny fomba manaraka
Ny atiny manodidina fanisana amin'ny doka amin'ny pejin-tranonkala, na ireo entity sy lohahevitra hita ao anaty horonan-tsary iray, dia alaina ary ampitaina amin'ny motera fahalalana.
Mampiasa ny motera algorithms manombatombana ny atiny miorina amin'ny andry telo, 'fiarovana, fahamendrehana ary ny maha-zava-dehibe' ary ny toe-javatra namokarana azy.
Ny vahaolana mandroso kokoa dia azo atao sosona fanampiny angon-drakitra tena izy mifandraika amin'ny tontolon'ny mpijery amin'ny fotoana ny doka dia jerena sy misy sosona, toy ny hoe mafana na mangatsiaka ny andro, na antoandro na alina, na raha atoandro atoandro.
Ankoatr'izay, raha tokony ho ny famantarana mifototra amin'ny cookie dia mampiasa fotoana tena izy famantarana mifototra amin'ny konteks, toa ny halehiben'ny olona amin'ny toerana mahaliana azy, ao an-trano ve izy ireo, sa mandeha sambo, sns.
Raha ny isa mety nihoatra ny tokonam-bidin'ny mpanjifa, nampandrenesina ny Demand Side Platform (DSP) hanohy amin'ny fividianana media.
Ny fandrindrana ny tontolon-kevitra mandroso dia mamakafaka lahatsoratra, feo, horonan-tsary ary sary mba hamoronana fizarana fitarihana ny zava-bita izay mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny mpanao dokam-barotra manokana, mba hisehoan'ny dokam-barotra amin'ny tontolo mifandraika sy mifanaraka amin'izany. Ka, ohatra, lahatsoratra iray momba ny Open Australia izay mety mampiseho an'i Serena Williams manao kiraro tenisy Nike mpiara-miasa aminy, ary avy eo ny dokam-barotra ho an'ny kiraro fanatanjahan-tena dia mety hiseho ao anatin'ny tontolo misy ifandraisany. Amin'ity tranga ity dia mifandraika amin'ny vokatra ny tontolo iainana.
Ny fikendrena ny fifandanjana tsara dia miantoka ihany koa ny fifandraisana tsy misy ifandraisany ratsy amin'ny vokatra iray, noho izany ohatra etsy ambony, hiantohana ny tsy hisehoan'ny doka raha ratsy ny lahatsoratra, vaovao sandoka, misy fitongilanana ara-politika na fampahalalana diso. Ohatra, ny doka momba ny kiraro tenisy dia tsy hiseho raha toa ka mikasika ny maha ratsy ny kiraro tenisy no mahatonga fanaintainana.
Mahomby kokoa noho ny mampiasa cookies an'ny antoko fahatelo?
Ny famaritana tontolon-kevitra dia naseho fa mahomby kokoa noho ny mikendry amin'ny fampiasana cookies an'ny antoko fahatelo. Raha ny marina, ny fandinihana sasany dia manome soso-kevitra fa afaka mikendry lasibatra mampitombo ny fikasana hividy 63%, mifanohitra amin'ny tanjon'ny mpihaino na fantsona.
Ny fandalinana mitovy hita 73% amin'ireo mpanjifa no mahatsapa doka mifandraika amin'izany nameno ny atiny na ny traikefa an-tsary amin'ny ankapobeny. Fanampin'izay, ny mpanjifa kendrena amin'ny sehatra toe-javatra dia 83% kokoa no mety hitory ny vokatra amin'ny doka, noho ireo kendrena amin'ny mpihaino na ny fantson'ny fantsona.
Ny fankasitrahana ny marika ankapobeny dia 40% ambony ho an'ny mpanjifa lasibatra eo amin'ny sehatry ny tontolon-kevitra, ary ny mpanjifa dia nanolotra doka ara-nofo raha nilaza fa handoa bebe kokoa amin'ny marika iray izy ireo. Ary farany, ny doka misy ny fifandraisan-davitra indrindra dia hita 43% bebe kokoa ny fikolokoloana neural.
Izany dia satria ny fahazoana ny mpanjifa amin'ny toe-tsaina mety amin'ny fotoana mety dia mahatonga ny doka ho lasa tsara kokoa, ary noho izany dia manatsara ny fikasana hividy mihoatra noho ny doka tsy misy dikany manaraka ny mpanjifa amin'ny Internet.
Tsy mahagaga izany. Tototry ny varotra sy dokam-barotra isan'andro ny mpanjifa, mandray hafatra an'arivony isan'andro. Izany dia mitaky azy ireo hanivana amin'ny fomba mahomby ny fandefasana hafatra tsy misy ifandraisany haingana, noho izany ny fandefasan-kafatra mifandraika irery ihany no hodinihina. Afaka jerentsika ity fahasosoran'ny mpanjifa ity tamin'ny fanapoahana baomba hita taratra amin'ny fitomboan'ny fampiasana ireo mpanakan-doka. Ny mpanjifa kosa dia mazoto mandray hafatra mifandraika amin'ny toe-javatra misy azy ireo ankehitriny, ary ny fampifantohana ny zava-misy dia mampitombo ny mety ho fifandraisan'ny hafatra amin'izy ireo amin'izao fotoana izao.
Ny fandrosoana, ny tanjona ifotony dia ahafahan'ny mpivarotra miverina amin'izay tokony hataon'izy ireo - mamorona fifandraisana tena izy, marina ary mangoraka amin'ireo mpanjifa amin'ny toerana mety sy amin'ny fotoana mety. Rehefa miverina amin'ny ho avy ny varotra, ny tanjona kendrena eo amin'ny sehatra dia ny lalana mandroso sy milamina kokoa handrosoana hafatra ara-barotra tsara sy misy dikany kokoa amin'ny ambaratonga.
Vakio bebe kokoa momba ny fikendrena ny zava-misy ao amin'ny taratasinay fotsy farany:
Ampidino ny Whitepaper mikendry tanjona
Tags: cookies cookiescontextual dokam-barotramarketing ara-nofotanjona ara-nofomofomamy-tsyCookiescookies cookiesmofomamy safari
Tim dia mpanolo-tsaina stratejika mitarika manana traikefa 20 taona mahery niasa teo amin'ny fihaonan'ny marketing sy ny haitao. Miombom-pihetseham-po amin'ny familiana traikefa ho an'ny mpanjifa tsara kokoa sy ny valin'ny orinasa matanjaka kokoa, i Tim dia niditra tao amin'ny Silverbullet ho GM an'ny Strategic Consulting tamin'ny Desambra 2019.
Ireo fiasa izay takiana amin'ny rafi-pitantanana atiny rehetra ho an'ny fanatsarana ny motera fikarohana